Su'aal: Semen Leakage (Shahwo daadashada)?
Author Topic: Su'aal: Semen Leakage (Shahwo daadashada)? (Read 5658 times)
« on: March 11, 2011, 09:43:11 PM »
Waxaan rabaa inaan ogaado waxa keena Semen leakage, maxaa lagu daaweyn karaa,
Re: Su'aal: Semen Leakage (Shahwo daadashada)?
« Reply #1 on: March 13, 2011, 08:29:37 PM »
"Semen Leakage" oo ah macnaheedu shahwada oo dareerto iyadoo aysan jirin kacsi buuxa ayaa waxay ka dhalataa in dabacsanaan ama shaqo yari ku timaada neerfaha lagu magacaabo "Parasympathetic".
Neerfahaan ayaa u xilsaaran in haniyaha biyo-baxa uu xiro inta kacsiga uu jiro si aysan shahwadu u soo dareerin laakin haddii neerfaha uu sidii laga rabay u shaqaynayn waxaa dabcaya haniyahii taasoo keeneysa in biyuhu soo baxaan.
Waxay cilladaani ka timaadaa siigeysiga badan ama dhawac gaara neerfahaan.
Waxaa ka mid dhibaatooyinka ay keensato cilladaan kacsi la'aan, biyo-bax degdeg ah, dhabar xanuun iyo qooro xanuun.
Tani waxaa lagu xallin karaa in la joojiyo siigeysiga, kala fogeysid galmadaada iyo in aad cuntid cunno u badan proteins.
Wixii intaa ka badan la xiriir takhtarkaaga.
« Reply #2 on: March 13, 2011, 11:22:58 PM »
waad mahadsantahay, aad ayaan ugu qancay jawaabtaada,
waxaan u baahanahay daqtar noocee ah ayaan u tagaa, ma dhaqtar Urologist or Neurologist, or Internist
« Reply #3 on: March 14, 2011, 09:00:06 PM »
La xariir takhtar Urologist ah.
Su'aal: Wax shahwo camal ayaa iga soo daadato markaan saxaroonayo?
Started by Kaatib20Board Qaybta Su'aalaha
Views: 3104 March 10, 2012, 11:40:10 AM
SU'AAL: BARASTA? SHAHWO DEDEG AH? KAADI AAN DHAMAANEYN?
Views: 3817 May 14, 2011, 10:58:03 PM
Su'aal: Shahwo iga timaado markaan musqusha galo?
Started by King of the jungleBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 1223 April 24, 2017, 02:58:01 PM
Su'aal: Markaan saxaroonayo, shahwo ayaa iga timaado?
Started by Xamze MohamedBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 2489 June 17, 2017, 01:58:02 PM
Su'aal: Xilliga galmada wax shahwo ah igama timaado?
Started by AragsanhagiBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 4077 March 04, 2018, 08:41:20 PM